၎င်းသည် Tokachi ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ ပရီမီယံအဖြစ်အပျက်များ၏နိဒါန်းဤတနင်္ဂနွေ။ "Snow Art" ကိုလူတိုင်းသိလား။ ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။ ရွာတစ်ရွာမှနှင်းဖုံးအနုပညာရှင် Nakasatsunai-mura တွင်အမှုန့်များသောနှင်းများကျနေသောနှင်းများနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေသောခမ်းနားသောဆီးနှင်းအနုပညာ! လှပသောဥယျာဉ် Tokachi Nakasatsunai-mura ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းရာသီသည်ဤဆီးနှင်းအနုပညာအပေါ်ဗဟိုပြုခြင်း! ...
လွန်ခဲ့သော ၆ ရက် က
၎င်းသည် Tokachi ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ Tokoki ဒေသဟော့ကိုင်းဒိုတွင်ခရီးသွားသူများအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် MaaS လျှောက်လွှာများကိုပေါင်းစပ်ထားသော MaaS သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုပုံစံကို ဦး တည်သွားပါမည်။ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ အဖြစ်အပျက်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အခမဲ့ pass လက်မှတ်များအပြင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့်လူကြိုက်များသောလက်ဝတ်ရတနာရေခဲများကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသည့်ရှုခင်းများသို့သွားသောခရီးများကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ခရီးသွားအထောက်အပံ့အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ ...
on coronavirus အသစ်အားကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုတယ်သို့တုံ့ပြန်မှု F ဤတစ်ကြိမ်တွင် SNS နှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့တွင် "Tokachigawa Onsen @ Toyosu Tei ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော Corona" ခေါင်းစဉ်မှားယွင်းသောဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းဤကိစ္စသည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကို ဦး စွာပြောပြပါရစေ။ ...
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! ဒါဟာ ၂၅ မျိုးဆက် Toka Aozora အမျိုးသမီး Sasai Nagahama ပါ။ Valentine's Day တွင်ကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်မြေ Memuro-cho ၌ရေခဲမီးခွက်တညရှိသည် ။F80A နွေးထွေးသောနေ့တစ်နေ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖယောင်းတိုင်များအရည်ပျော်ကျသောနေရာများရှိခဲ့ပြီးသင်နှင့်လူတိုင်းသည်လည်းဆီးနှင်းမီးကိုပြုပြင်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ငါပါဝင်ခဲ့ ငါများစွာသောသူတို့သည်ဤနည်းဖြင့်ပါ ၀ င်ပြီးကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့သည် ။F80A ညအချိန်တွင်အေးခဲလာပြီး Memuro မြို့သည်နွေးထွေးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ငါ Tokada ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူးတာ ၀ န်ပါ။ ငါအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရတဲ့ Dream Latte, Kamishihoro-cho ကိုသွားခဲ့တယ်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောဆိုင်ရှိ Dream Hill မှ Yakiniku သည်ဂျပန်အမဲသားအမဲသားကိုထုတ်လုပ်သည်။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးအသားမှာကောင်းတဲ့ဆာရှိမိရှိတယ်! အရသာရှိတဲ့! စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအခြားမီနူးများသာ! နောက်ထပ်ဘာစားရမည်နည်း။ အားလပ်သောနေ့လည်စာစားရန်အကြံပြုသည်။ # ဟော့ကိုင်းဒို # တိုချိ # ကာမစ်ရှီရို # ဒေါ်လီ Murate ...
Tokachi ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် bendrino įrašą။